टी-२० मा प्रदर्शन कमजोर, चर्चा बढी कमाएका ३ क्रिकेटर
By क्रिकेट पाटी	 On Jun 5, 2021
काठमाडौं : टी-२० क्रिकेटको आगमनसँगै विश्व क्रिकेटको अवस्था परिवर्तन भएको छ। सुरुमा टी-२० क्रिकेटको आगमनले अन्य ढाँचामा अवस्था बिगार्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो। यद्यपि अन्य क्रिकेट प्रारूपको महत्व पनि कम भएको छैन ।
वर्तमान समयमा धेरैको रोजाई टी-२० क्रिकेट हुने गरेको छ । खेलाडीहरूको छिटो खेलले टी-२० क्रिकेटलाई बढी मनपर्ने बनायो । जस कारणले पनि दर्शकहरूले टी-२० लाई बढी महत्व दिएका छन्।
टी-२० क्रिकेटमा छिटो खेल्ने खेलाडी जहिले पनि चर्चामा रहन्छन् । चर्चा बढी भए पनि प्रदर्शन भने त्यसअनुसार हुँदैन । अन्य प्रारूपमा सफल भइरहे पनि टी-२० मा भने केही खेलाडीको सोचे अनुरूप प्रदर्शन गर्न सकिरहेका हुँदैनन् ।
यसैबीच, आज सधैं चर्चामा रहने तर अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० मा अपेक्षाकृत प्रदर्शन गर्न नसकेका तीन चर्चित ब्याट्सम्यानको चर्चा गर्दैछौँ :
१. ऋषभ पन्त : यो सूचीमा भारतीय युवा विकेटकीपर/ब्याट्सम्यान ऋषभ पन्तको नाम पनि आउँछ । उनी अहिलेका स्टार क्रिकेटरमध्ये एक हुन् ।
घरेलु क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शनपछि पन्तले भारतीय टिमबाट अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० पनि डेब्यू गरे । तर, अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० मा भने उनको प्रदर्शन राम्रो हुन सकेको छैन ।
यद्यपि पन्तको चर्चा भने हमेशा भइरहेको हुन्छ । उनले चर्चाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० मा लोभलाग्दो प्रदर्शन देखाउन सकेनन् ।
पन्तले हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ३३ टी-२० म्याच खेलेका छन् । जसमा उनले ५ सय १२ रन बनाएका छन् ।
आईपीएलमा पन्त १५१ बढीको स्ट्राइक रेटमा ब्याटिङ गर्छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० मा भने उनको स्ट्राइक रेट १२३.०७ को मात्र छ ।
२. डेविड मिलर : डेविड मिलर दक्षिण अफ्रिकाका विस्फोटक ब्याट्सम्यान हुन् । उनले आईपीएलको एक सिजनमा राम्रो प्रदर्शन गरेपछि चर्चाको शिखरमा आएका थिए ।
मिलरले दक्षिण अफ्रिकाका लागि ठूलो योगदान दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, चर्चाअनुसार राष्ट्रिय टिमका लागि उनको प्रदर्शन हुन सकेको छैन ।
मिलरले हालसम्म दक्षिण अफ्रिकाका लागि ८१ अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० म्याच खेलेका छन् । जसमा उनले १ हजार ५ सय २५ रन बनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० मा उनले एक शतक र तीन अर्धशतक मात्र बनाएका छन् ।
३. फखर जमान : पाकिस्तान टिमका फखर जमान पनि विस्फोटक ब्याट्सम्यानका रूपमा चिनिन्छन् । पाकिस्तानका लागि वानडेमा दोहोरो शतक बनाएपछि उनको चर्चा शिखरमा पुगेको थियो ।
त्यस्तै, च्याम्पियन्स ट्रफीमा भारतविरुद्ध शतक बनाएपछि उनी झन् चर्चित बने । तर, टी-२० भने उनको प्रदर्शन नामअनुसार हुन सकेको छैन ।
जमानले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा आजसम्म ४६ टी-२० म्याच खेलेका छन् । जसमा उनले ९ सय ४८ रन मात्र बनाउन सकेका छन् ।
ओपनिङ ब्याट्सम्यानको भूमिका निर्वाह गर्ने जमानले अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० मा पाँच मात्र अर्धशतक बनाएका छन् ।
ऋषभ पन्तटी-२० क्रिकेटडेविड मिलरफखर जमान